I-50 Ininzi Iingxoxo zoMdliwano-mbuzo eziqhelekileyo ongabhekana nazo kwi-Interviews | IYO
I-50 Ininzi Iingxoxo Zemibuzo Yoluntu
Ngokumalunga nenkqubo yodliwano ndlebe, uphando kunye nelungiselelo lothintathelwano lunokulawula isigqibo sakho sokwenza oku kuluhlu olulandelayo. Enye yezona ndlela ezilungele ukulungiselela umntu ojongene nomsebenzi ukuhlangabezana nokuphendula kwakho kwimibuzo yongxoxo-ndlebe-nokuba yinto engavamile.
Ukukunceda uqale, IYO Kuhlonywe ngenani elikhulu lophando lwangudliwano-ndlebe ukufumanisa iimeko eziqhelanisiweyo zemibuzo yodliwano-ndlebe nabafaki zicelo zifunwa phakathi kwee-interviews zakudala. Ngaloo ndlela, kwithuba elihle lokuba unomsebenzi odibeneyo wokudibanisa, ulunge phambi kwesibuko okanye ucele umngane okanye isihlobo kuye kwiimpendulo zakho kwimibandela elandelayo kunye ukuze ulungele ukubeka unyawo lwakho olungcono phambili.
Imibuzo eDlulileyo yoPhulo-ndlebe
Ziziphi iimpawu zakho?
Ziziphi iingxaki zakho?
Ngaba kuchanekile ukuba uthi uya kuhamba?
Kutheni unomdla ekusebenzeni [faka igama lenhlangano apha]?
Kutheni ungathanda ukushiya inhlangano yakho yangoku?
Kutheni bekukho ulungelo emsebenzini wakho phakathi [faka usuku] kunye [faka usuku]?
Yintoni onokukwazi ukusinika yona ukuba omnye umntu akakwazi?
Uzibona phi kwiminyaka emihlanu? Iminyaka elishumi?
Ziziphi izinto ezintathu umlawuli wakho wangaphambili angathanda ukuba uphucule?
Ngaba kuyinyaniso ukuba uya kuhamba?
Ndifundise malunga nexesha owenze ngayo impazamo.
Iyintoni umsebenzi wakho wefantasy?
Ndixelele malunga nempumelelo ovuyiswayo ngayo.
Yiyiphi inxulumano yakho ngokukrakra?
Yintoni onokuyithemba ukuyigqiba kwiintsuku ze-30 / iintsuku ze-60 / iintsuku ze-90 emsebenzini?
Thetha malunga nokuqhubeka kwakho.
Thetha ngesiseko sakho esiyalayo.
Ndixelele ukuba ungayinyamekela njani imeko enzima.
Kutheni kungaba yinto efanelekileyo ukuba sivumelwano nawe?
Ungayifumana njani umoya?
Ngaba uza kusebenza / ukuphela kweveki?
Ziziphi iimbuyekezo zakho eziyimfuneko?
Kutheni ufuna olunye umsebenzi?
Nika ixesha xa uhamba ngaphaya kwezinto ezifunekayo ukuze usebenze.
Ziziphi iingxelo zakho ngokukhawuleza ezithethayo malunga nawe?
Yintoni eyenza ukuba
Yintoni ekufikelelekeni kwakho?
Ngoobani abathandana nabo?
Ngubani okhokelayo wakho?
Yiyiphi into edidekileyo yakho?
Ndixelele malunga nexesha apho ungenakukunceda ukuphikisana nomphathi wakho.
Liliphi igama le-CEO yethu?
Ziziphi iinjongo zakho zomsebenzi?
Unokuyenza njani ubunzima?
Ziziphi iimpawu zeesuphavayiza / iimpazamo zakho?
Yintoni ephakanyiswayo kusasa?
Kukhuselekile ukutsho ukuba ungumvulindlela okanye umxhasi?
Yayiyiphi incwadi yokugqibela oyisebenzisileyo ngaphandle kwesizathu esithile?
Ngethuba elide lokuba ndibize umnqamleli wakho kule mzuzwana ndize ndibuze ukuba yintoni ummandla onokuyandisa, ungathini na?
Iyintoni indawo yakho ethandekayo kakhulu?
Yintoni eyenza ungenzeki?
Ziziphi izinto zokuzonwabisa?
Ziziphi ezinye zegunya lakho lokuhlangana?
Ungatshisa njani umntu?
Ngaba ungasebenza ii-40 + iiyure ezisixhenxe iintsuku?
Unokulawula njani umthengi onomsindo okanye onomsindo?
Yintoni oyithandayo kakhulu kunye ncinane kakhulu ngokusebenza kule shishini?
Yimiphi imibuzo engingazange ndibuze yona?
Yiyiphi imibuzo onayo kum?
Le mibuzo ifunwa ngokuqhelekileyo ngendlebe nodliwano-ndlebe kuYobhi, imibuzo eninzi engalindelekanga kunye neyodwa.
Ungalibali ukuphendula kwi-Commnets ukuba yiyiphi enye imibuzo evamile oye wabuzwa ngexesha lo dliwano-ndlebe?